Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Thailandy jamba mankany amin'ny fiakarana COVID-19: manosika ny boaty fasika Phuket
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Phuket Sandbox fidiram-bola manan-danja kokoa noho ny fahasalamana
Na eo aza ny fitomboan'ny tranga COVID-19 manerana an'i Thailand, nilaza ny mpitondra tenin'ny Ivotoerana misahana ny toe-karena toekarena (CESA), Thanakorn Wangboonkongchana, androany fa ny fampielezan-kevitr'i Phuket Sandbox dia tokony hanohy amin'ny fanitsiana tsy tapaka natao hamahana ireo fanamby.
Phuket dia nivarotra trano fandraisam-bahiny 335,000 tamin'ny hotely tamin'ny volana Jolay-septambra teo ambanin'ny fampielezana Sandbox.
8.9 miliara baht (265.9 tapitrisa dolara amerikana) ny tanjona kendrena mandritra io fe-potoana telo volana io.
Ny Phuket Sandbox hatramin'ny nanombohany dia efa namorona sahabo ho 1 lavitrisa baht (29.9 tapitrisa dolara amerikana).
Ny adihevitra dia ny fampielezan-kevitra amin'izao dingana izao dia efa nanampy tamin'ny famoronana asa, eo am-panomanana ny manintona ho an'ny fizahan-tany fizahan-tany mahazatra amin'ny faran'ny taona. Miantso ny valin'ny fampielezan-kevitr'i Phuket Sandbox ho tsara ny governemanta, mandroso hanokatra ny firenena ho an'ireo mpizahatany vita vaksiny, manomboka amin'ny faritanin'ny nosy Phuket.
Wangboonkongchana dia nilaza fa manantena ny fampielezan-kevitra ny hetsika amin'ny volana aogositra sy septambra, miaraka amin'ny kendrena ho an'ny mpitsidika olona miisa 100,000 8.9 amin'ny volana jolay-septambra, ary 265.9 miliara baht (XNUMX tapitrisa dolara amerikana) no tanjona kendrena amin'io fotoana io ihany. Niantso ny mponina tao an-toerana izy mba ho tsara vahinin'ny mpitsidika, manome azy ireo fahatsapana tsara rehefa miantoka ny fiarovana azy ireo.
Ny fanentanana ny fizahan-tany fitsidihan'ny pilot'i Thailandy Phuket Sandbox dia efa nahazo vola mitentina 1 lavitrisa baht (29.9 tapitrisa dolara amerikana) hatramin'ny nanokafana ny volana lasa teo ary hatreto dia noraisina an-tsakany sy an-davany sahabo ho 17,000 ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena, raha 335,000 kosa ny fijanonana amin'ny hotely XNUMX no voapetraka mandritra ny volana Jolay-septambra.